ကြှနျတျော တို့ ပတျဝနျးကငျြက ပိုးစုနျးကွူးလေးတှေ မြိုးတုနျး ပြောကျကှယျ သှားပွီလား – Cele Posts
ကြှနျတျော တို့ ပတျဝနျးကငျြက ပိုးစုနျးကွူးလေးတှေ မြိုးတုနျး ပြောကျကှယျ သှားပွီလား
ကြှနျ‌ဝျော တို့ပတျဝနျးကငျြမှာ ပိုးစုနျးကွူးလေး တှကေို မတှရေ့တော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ? မွိုးတုနြးကုနတြာလား? ဒီနေ့ တနသွာရီဂှာနယမွှာ ဒီအကှောငွးလေးရှငွးပှထားတာတှလေို့ စိတဝွငစွားပှီး google မှာပါရှာဖတကွှည့မွိတယွ။ ပိုးစုနျးကွူးတှကေ နှဦေးရာသီရဲ့ပိုးကောငျလေးတှပေါ။မကွာခငျရောကျလာတော့မယျ့ နှဦေးကစလို့ June လ လောကျထိ ပိုးစုနျးကွူးတှေ ပျေါလာတကျတဲ့ရာသီပါပဲ။ ပိုးစုနျးကွူးမြိုးစိတျပေါငျး ၂,၀၀၀ ၀နျးကငျြလောကျရှိပါတယျတဲ့ ။အကောငျအကွီးအသေးရှိတယျ။တခြို့က ပနျးဝတျရညျကိုစားတယျ။ဘကျတီးရီးယားစားတယျ။ တခြို့ ပိုးစုနျးကွူးတှကေ အခငျြးခငျြးပွနျစားကွပါတယျ။
ပိုးစုနျးကွူးတှဟော ဒိုငျနိုဆောတှနေဲ့ခတျေပွိုငျလို့တောငျပညာရှငျတှကေဆိုပါတယျ။သူတို့ ကမ်ဘာပျေါမှာ ရှိခဲ့တာ နှဈသနျးပေါငျး 100 ကြျောပါပွီတဲ့။ ဒါပမေယျ့ လူသားတှအေနနေဲ့ ဒီ‌သကျတမျးရငျ့ ပိုးကောငျငယျတှကေို ထိနျးသိမျးဖို့၊ကွငျနာဖို့ ပကျြကှကျခဲ့ကွပါတယျ။ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေိုယျတိုငျတောငျ 2018 ခုနှဈလောကျမှ ပိုးစုနျးကွူးတှပြေောကျကှယျလာတာကိုအရေးတကွီး အဖွဈ သုတသေနတှပွေုကွ။ထိနျးသိမျးဖို့ စာတမျးတှဖေတျကွ။အဖှဲ့တှဖှေဲ့ကွနဲ့ လှုပျရှားလာခဲ့တယျလို့ The Guardian သတငျးစာက ဆိုပါတယျ။ ဒီသုတသေနတှလေုပျပွီးမှပဲ ပညာရှငျတှဟော ပိုးစုနျးကွူးတှအေကွောငျးပိုသိလာခဲ့ပါတယျ။ The Guardian က ပိုးစုနျးကွူးတှပြေောကျကှယျလာရတာကိုအခကျြ3ခကျြနဲ့ထောကျပွပါတယျ။ အားလုံးဟာ ပိုးစုနျးကွူးတှရေဲ့ Life Cycle ဘ၀စကျဝနျးကို နားမလညျကွတဲ့ ၊နယျခြဲ့ခငျြတဲ့ လူတှရေဲ့ အပွဈပါပဲ။
(၁)မွို့ပွဖှံဖွိုးလာခွငျး။ – မွဈကမျးလိုနရော။ ခြောငျးဘေးမွောငျးဘေးတှမှော ရနေဲ့နီးတဲ့ကှငျးပွငျကယျြတှမှော ပိုးစုနျးကွူးတှေ နပေါတယျ။ ‌ဆောငျးရာသီမှာ သားလောငျး ခတြယျ။Larva လို့ချေါတဲ့ ပိုးတီအဖွဈနတေယျ။ နှဦေးမှ သူတို့ထှကျလာကွပါတယျ။ ပွဿနာက မီးလေးလငျးပွီး ဟိုဒီပြံနမှေ လူတှကေ ပိုးစုနျးကွူးမှနျး သိကွတာပါ။ သားလောငျးအဆငျ့ Larva အဆငျ့မှာ သူတို့ကို‌ခွရောခံဖို့ခကျသလို တျောယုံလညျးမမွငျရပါဘူး။ ပွီးတော့ အဲ့အဆငျ့မှာတငျ လနေဲ့အတူလှငျ့ပါသှားနိုငျပါသေးတယျ။ မွို့ပွဖှံဖွိုးမှုရဲ့ နောကျမှာ သူတို့နဲ့ သဟဇာတ ဖွဈတဲ့ ပတျဝနျးကငျြမရှိတော့တာ သိပျတော့မဆနျးလှပါဘူး။
(၂)ပိုးသတျဆေးနဲ့ဓာတုဓါတျကွှငျးမြား – ဒါကလညျးသိပျမဆနျးပါဘူး။ ပိုးစုနျးကွူးဟာ Soft-bodied ပိုးကောငျငယျတှဖွေဈတယျ။သူတို့ဖှဲ့စညျးပုံအရ ပိုးသတျဆေး‌ကို ဘယျလိုမှခံနိုငျရညျမရှိပါဘူး။ သူတို့မှာအကာအကှယျဆိုလို့ ဖငျမှာလငျးနတေဲ့ Bioluminescence လို့ချေါတဲ့ Cold-fire မီးတောကျအေးတှပေဲရှိပွီး ဘကျတီးရီးယားကာကှယျဖို့ပဲတကျနိုငျတာပါ။ ပိုးသတျဆေးကွောငျ့ သားလောငျးဘ၀၊ Larva မှာတငျ ရှောကုနျကွပွီး အကောငျဖွဈလာရငျလညျး မြိုးရိုးဗီဇခြို့ယှငျ့ပွီး အသကျမရှညျပါဘူးတဲ့။
(၃)Light pollution အလငျးညဈညမျးခွငျး – ဒါက စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့အခကျြတဈခုပါ။ ပိုးစုနျးကွူးတှရေဲ့ နောကျဖငျက လငျးတဲ့ မီးက အခငျြးခငျြးဆကျသှယျဖို့၊ မိတျလိုကျဖို့ ၊အစာရှာဖို့၊သားကောငျမြှားဖို့ အသုံးဝငျပါတယျ။ မြိုးဥခဖြို့ ၊အစာခဖြေို့၊အထီးအမဆှဲဆောငျဖို့၊ရောဂါကာကှယျဖို့ စသညျဖွငျ့ ဒီနောကျဖငျမီးက ပိုးစုနျးကွူးအတှကျအရာရာပါပဲ။
မြိုးစိတျပေါငျး ၂၀၀၀ လောကျရှိတဲ့ ပိုးစုနျးကွူးတှမှော သူ့မြိုးစိတျနဲ့သူ မီးလငျးတဲ့ပုံစံမတူပါဘူး။ Patternကှဲပါတယျတဲ့။ မီးလငျးတဲ့စတိုငျမတူပါဘူး။ ရယျရခကျ Factတဈခုရှိတယျ။
ဒီထဲမှာ Photurisလို့ချေါတဲ့ ပိုးစုနျးကွူးမြိုးစိတျ အမ တှဟော Photinus လို့ချေါတဲ့ ပိုးစုနျးကွူးမြိုးစိတျတှေ မီးလငျးတဲ့ ပုံစံအတိုငျးအတုခိုးနိုငျပါတယျတဲ့။ အဲ့လို မြိုးတူသယောငျမီးလငျးပွပွီးတော့ မိတျလိုကျဖို့လာတဲ့ အထီးတှကေိုစားပဈပါသတဲ့။ အျော မိနျးမ။ ဆိုတော့ ဖငျမီးဟာ အရာရာဖွဈနတေဲ့ပိုးစုနျးကွူးတှဟော လူသားတှထှေနျးတဲ့အလငျးရောငျကွောငျ့ အမြားကွီးဒုက်ခရောကျပါသတဲ့။ မီးရောငျတှကွေားမှာ သူတို့မဆကျသှယျနိုငျပါဘူး၊မိတျမလိုကျ မြိုးမပှားနိုငျတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနညျးနဲ့ သူတို့ကို ကြှနျတျောတို့ဆုံးရှုံးရတာပါ။ ပိုပွီးဆိုးတာက LEDမီးတှပေါ။ Blue Ray ပါဝငျတဲ့ LED စနဈမီးရောငျကို ဒီကောငျတှပေိုပွီးမခံနိုငျပါဘူး။မူးဝတောတှေ နမေကောငျးတာတှတေောငျဖွဈတယျလို့ သိပ်ပံပညာက အတိအကဆြိုပါတယျ။ နဂိုမူလကိုက အနကျရောငျအမှောငျကိုခုံမငျတဲ့ ပိုးစုနျးကွူးတှကေ လူသားတှေ ပယောဂကွောငျ့ဖွဈတဲ့ အလငျးညဈညမျးမှု ကို ဘယျလိုမှမခံနိုငျပါဘူး။
(၄) သူတို့ဘယျလိုထိနျးသိမျးကွလဲ။ – ၁၉၂၀ လောကျက ဂပြနျနိုငျငံမှာ ‌တောထဲရှာထဲရှိတဲ့ ပိုးစုနျးကွူးတှဖေမျးပွီး မွို့တျောတိုကြိုကို ပို့ကွပါသတဲ့။ မွို့တျောလှစဖေို့ပါ။ အဲ့လိုနဲ့ ပိုးစုနျးကွူးအရအေတှကျနညျးလာတဲ့အခါ 2010လောကျမှာဂပြနျပညာရှငျတှဟော ပိုးစုနျးကွူးကိုစတငျထိနျးသိမျးလာကွပါတယျ။ အမရေိကနျဟာ 2018မှာ ပညာရှငျတှဖှေဲ့ပွီး ပိုးစုနျးကွူးထိနျးလာလိုကျတာ အခုဆိုရငျ မြိုးစိတျ 200 လောကျကို အမရေိကမှာတှနေိုငျပါသေးတယျ။ အဓိကက Citizen Science ဆိုတဲ့ လူထုအခွပွေုအဖှဲ့တှဖှေဲ့ပွီး Knowledgeရှဲတယျ၊အဖှဲ့တှဖှေဲ့တယျ ပိုးစုနျးကွူးအုပျတှရေ့ငျသတိထားထိနျးသိမျးကွတယျ။ အာရှမှာတော့ မလေးရှားနိုငျငံကလှဲရငျ တခွားနိုငျငံ‌တှမှော ပိုးစုနျးကွူးမြိုးတျောတျောမြားမြား မြိုးတုံးကုနျကွပါပွီ။ ရနျကုနျမှာတော့ ပိုးစုနျးကွူးတှမေတှရေ့တာကွာပါပွီ။ ပိုးစုနျးကွူးဟာ နှဈလိုဖှယျရာပိုးကောငျတှပေါ။ ကမ်ဘာမွရေဲ့အမှအေနှဈလညျးဖွဈပါတယျ။ သူတို့ပြောကျကှယျသှားမှာတော့မလိုလားစရာပါပဲ။ Guardianသတငျးစာကတော့ အကွံတဈခုပေးပါတယျ။ တကျနိုငျသလောကျ အလငျးညဈညမျးမှုလြော့ခဖြို့ပါ။ ညဘကျ‌တှမှော မလိုအပျပဲ မီးခလုတျတှကေို မဖှငျ့လိုကျပါနဲ့တဲ
Crd Pyi Hein Thaw
ကျွန်‌ဝော် တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုးစုန်းကြူးလေး တွေကို မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ? မြိုးတုနျးကုနျတာလား? ဒီနေ့ တနသြာရီဂွာနယမြှာ ဒီအကှောငြးလေးရှငြးပှထားတာတှေ့လို့ စိတဝြငစြားပှီး google မှာပါရှာဖတကြှည့မြိတယြ။ ပိုးစုန်းကြူးတွေက နွေဦးရာသီရဲ့ပိုးကောင်လေးတွေပါ။မကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့် နွေဦးကစလို့ June လ လောက်ထိ ပိုးစုန်းကြူးတွေ ပေါ်လာတက်တဲ့ရာသီပါပဲ။ ပိုးစုန်းကြူးမျိုးစိတ်ပေါင်း ၂,၀၀၀ ၀န်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်တဲ့ ။အကောင်အကြီးအသေးရှိတယ်။တချို့က ပန်းဝတ်ရည်ကိုစားတယ်။ဘက်တီးရီးယားစားတယ်။ တချို့ ပိုးစုန်းကြူးတွေက အချင်းချင်းပြန်စားကြပါတယ်။
ပိုးစုန်းကြူးတွေဟာ ဒိုင်နိုဆောတွေနဲ့ခေတ်ပြိုင်လို့တောင်ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။သူတို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိခဲ့တာ နှစ်သန်းပေါင်း 100 ကျော်ပါပြီတဲ့။ ဒါပေမယ့် လူသားတွေအနေနဲ့ ဒီ‌သက်တမ်းရင့် ပိုးကောင်ငယ်တွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့၊ကြင်နာဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်တောင် 2018 ခုနှစ်လောက်မှ ပိုးစုန်းကြူးတွေပျောက်ကွယ်လာတာကိုအရေးတကြီး အဖြစ် သုတေသနတွေပြုကြ။ထိန်းသိမ်းဖို့ စာတမ်းတွေဖတ်ကြ။အဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြနဲ့ လှုပ်ရှားလာခဲ့တယ်လို့ The Guardian သတင်းစာက ဆိုပါတယ်။ ဒီသုတေသနတွေလုပ်ပြီးမှပဲ ပညာရှင်တွေဟာ ပိုးစုန်းကြူးတွေအကြောင်းပိုသိလာခဲ့ပါတယ်။ The Guardian က ပိုးစုန်းကြူးတွေပျောက်ကွယ်လာရတာကိုအချက်3ချက်နဲ့ထောက်ပြပါတယ်။ အားလုံးဟာ ပိုးစုန်းကြူးတွေရဲ့ Life Cycle ဘ၀စက်ဝန်းကို နားမလည်ကြတဲ့ ၊နယ်ချဲ့ချင်တဲ့ လူတွေရဲ့ အပြစ်ပါပဲ။
(၁)မြို့ပြဖွံဖြိုးလာခြင်း။ – မြစ်ကမ်းလိုနေရာ။ ချောင်းဘေးမြောင်းဘေးတွေမှာ ရေနဲ့နီးတဲ့ကွင်းပြင်ကျယ်တွေမှာ ပိုးစုန်းကြူးတွေ နေပါတယ်။ ‌ဆောင်းရာသီမှာ သားလောင်း ချတယ်။Larva လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးတီအဖြစ်နေတယ်။ နွေဦးမှ သူတို့ထွက်လာကြပါတယ်။ ပြဿနာက မီးလေးလင်းပြီး ဟိုဒီပျံနေမှ လူတွေက ပိုးစုန်းကြူးမှန်း သိကြတာပါ။ သားလောင်းအဆင့် Larva အဆင့်မှာ သူတို့ကို‌ခြေရာခံဖို့ခက်သလို တော်ယုံလည်းမမြင်ရပါဘူး။ ပြီးတော့ အဲ့အဆင့်မှာတင် လေနဲ့အတူလွင့်ပါသွားနိုင်ပါသေးတယ်။ မြို့ပြဖွံဖြိုးမှုရဲ့ နောက်မှာ သူတို့နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မရှိတော့တာ သိပ်တော့မဆန်းလှပါဘူး။
(၂)ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ဓာတုဓါတ်ကြွင်းများ – ဒါကလည်းသိပ်မဆန်းပါဘူး။ ပိုးစုန်းကြူးဟာ Soft-bodied ပိုးကောင်ငယ်တွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပိုးသတ်ဆေး‌ကို ဘယ်လိုမှခံနိုင်ရည်မရှိပါဘူး။ သူတို့မှာအကာအကွယ်ဆိုလို့ ဖင်မှာလင်းနေတဲ့ Bioluminescence လို့ခေါ်တဲ့ Cold-fire မီးတောက်အေးတွေပဲရှိပြီး ဘက်တီးရီးယားကာကွယ်ဖို့ပဲတက်နိုင်တာပါ။ ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် သားလောင်းဘ၀၊ Larva မှာတင် ရှောကုန်ကြပြီး အကောင်ဖြစ်လာရင်လည်း မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင့်ပြီး အသက်မရှည်ပါဘူးတဲ့။
(၃)Light pollution အလင်းညစ်ညမ်းခြင်း – ဒါက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ ပိုးစုန်းကြူးတွေရဲ့ နောက်ဖင်က လင်းတဲ့ မီးက အချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့၊ မိတ်လိုက်ဖို့ ၊အစာရှာဖို့၊သားကောင်မျှားဖို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။ မျိုးဥချဖို့ ၊အစာချေဖို့၊အထီးအမဆွဲဆောင်ဖို့၊ရောဂါကာကွယ်ဖို့ စသည်ဖြင့် ဒီနောက်ဖင်မီးက ပိုးစုန်းကြူးအတွက်အရာရာပါပဲ။
မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ပိုးစုန်းကြူးတွေမှာ သူ့မျိုးစိတ်နဲ့သူ မီးလင်းတဲ့ပုံစံမတူပါဘူး။ Patternကွဲပါတယ်တဲ့။ မီးလင်းတဲ့စတိုင်မတူပါဘူး။ ရယ်ရခက် Factတစ်ခုရှိတယ်။
ဒီထဲမှာ Photurisလို့ခေါ်တဲ့ ပိုးစုန်းကြူးမျိုးစိတ် အမ တွေဟာ Photinus လို့ခေါ်တဲ့ ပိုးစုန်းကြူးမျိုးစိတ်တွေ မီးလင်းတဲ့ ပုံစံအတိုင်းအတုခိုးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဲ့လို မျိုးတူသယောင်မီးလင်းပြပြီးတော့ မိတ်လိုက်ဖို့လာတဲ့ အထီးတွေကိုစားပစ်ပါသတဲ့။ အော် မိန်းမ။ ဆိုတော့ ဖင်မီးဟာ အရာရာဖြစ်နေတဲ့ပိုးစုန်းကြူးတွေဟာ လူသားတွေထွန်းတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့် အများကြီးဒုက္ခရောက်ပါသတဲ့။ မီးရောင်တွေကြားမှာ သူတို့မဆက်သွယ်နိုင်ပါဘူး၊မိတ်မလိုက် မျိုးမပွားနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနည်းနဲ့ သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးရတာပါ။ ပိုပြီးဆိုးတာက LEDမီးတွေပါ။ Blue Ray ပါဝင်တဲ့ LED စနစ်မီးရောင်ကို ဒီကောင်တွေပိုပြီးမခံနိုင်ပါဘူး။မူးဝေတာတွေ နေမကောင်းတာတွေတောင်ဖြစ်တယ်လို့ သိပ္ပံပညာက အတိအကျဆိုပါတယ်။ နဂိုမူလကိုက အနက်ရောင်အမှောင်ကိုခုံမင်တဲ့ ပိုးစုန်းကြူးတွေက လူသားတွေ ပယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အလင်းညစ်ညမ်းမှု ကို ဘယ်လိုမှမခံနိုင်ပါဘူး။
(၄) သူတို့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြလဲ။ – ၁၉၂၀ လောက်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ‌တောထဲရွာထဲရှိတဲ့ ပိုးစုန်းကြူးတွေဖမ်းပြီး မြို့တော်တိုကျိုကို ပို့ကြပါသတဲ့။ မြို့တော်လှစေဖို့ပါ။ အဲ့လိုနဲ့ ပိုးစုန်းကြူးအရေအတွက်နည်းလာတဲ့အခါ 2010လောက်မှာဂျပန်ပညာရှင်တွေဟာ ပိုးစုန်းကြူးကိုစတင်ထိန်းသိမ်းလာကြပါတယ်။ အမေရိကန်ဟာ 2018မှာ ပညာရှင်တွေဖွဲ့ပြီး ပိုးစုန်းကြူးထိန်းလာလိုက်တာ အခုဆိုရင် မျိုးစိတ် 200 လောက်ကို အမေရိကမှာတွေနိုင်ပါသေးတယ်။ အဓိကက Citizen Science ဆိုတဲ့ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီး Knowledgeရှဲတယ်၊အဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ် ပိုးစုန်းကြူးအုပ်တွေ့ရင်သတိထားထိန်းသိမ်းကြတယ်။ အာရှမှာတော့ မလေးရှားနိုင်ငံကလွဲရင် တခြားနိုင်ငံ‌တွေမှာ ပိုးစုန်းကြူးမျိုးတော်တော်များများ မျိုးတုံးကုန်ကြပါပြီ။ ရန်ကုန်မှာတော့ ပိုးစုန်းကြူးတွေမတွေ့ရတာကြာပါပြီ။ ပိုးစုန်းကြူးဟာ နှစ်လိုဖွယ်ရာပိုးကောင်တွေပါ။ ကမ္ဘာမြေရဲ့အမွေအနှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားမှာတော့မလိုလားစရာပါပဲ။ Guardianသတင်းစာကတော့ အကြံတစ်ခုပေးပါတယ်။ တက်နိုင်သလောက် အလင်းညစ်ညမ်းမှုလျော့ချဖို့ပါ။ ညဘက်‌တွေမှာ မလိုအပ်ပဲ မီးခလုတ်တွေကို မဖွင့်လိုက်ပါနဲ့တဲ
ပဋ္ဌာန်းရွတ် တဲ့အခါ ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဒီဘဝမှာ ပဲ အ ကျိုးပေးအောင် စံချိန်ကိုက် ရွတ်ဖတ်နည်း (၄)နည်း ရှိသည်။
သင် သူ့ကို “လက်လွှတ်သင့်နေပြီဆိုတာ” သိရှိ...
လပြည့် ည ရောက် တိုင်း ရွတ် ဆို ရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ...
အင်မတန် တန်ခိုး ကြီးပြီး ဖူးမြော်ရ တကယ်ခက် တဲ့...